Day: Mee 9, 2020
Coronavirus butere ihe kariri nde Nde ato na 3 Ndi n'uwa
A na-akọ na ụdị ụdị coronavirus ọhụrụ a na-apụta na Wuhan, mpaghara Hubey nke China, ebunyela ihe karịrị nde mmadụ atọ nde 3 n'ụwa niile. Dabere na nkwupụta nke Onye isi oche Nkwukọrịta Onye isi ala, 981 nde 3 [More ...]
'Withgabiga na Escalator' na Doğupark
Obodo Samsun na-emejuputa atumatu dị mkpa na Doğupark. A ga - emecha ọkwa mbụ nke ngabiga ahụ na - enweghị mkpochapụ, nke ga - eme ka ndụ ndị agadi na nkwarụ nwere nkwarụ kwụsị, obere oge ma tinye ya n'ọrụ. Samsun Obodo ukwu [More ...]
Amachibido Usoro Iwu na Kayseri
Obodo Kayseri na-aga n’ihu na-arụzigharị ọrụ ya n'okporo ụzọ ebe ezumike maka usoro iwu. Ka a na-arụ ụfọdụ ọrụ akụrụngwa KASKİ n'okporo ụzọ ụfọdụ dị na etiti obodo, ndị otu Science Work na-arụkwa ọrụ asphalting. Obodo Obodo [More ...]
Sancaktepe City Hospital Metro ga-ebute na 2022
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo nke isi obodo Metropolitan nke Istanbul, mere nyocha na saịtị abụọ iwu ihe owuwu n'akụkụ ndị Anatolia na Europe, bụ ndị ka na-arụ ọrụ na mbido. Oge mbu Imamoğlu bụ ịmalite ọchịchị izizi na 2017 wee kwụsị ya n'otu afọ ahụ. [More ...]
Ọnụ ọgụgụ ndị na-eyi ọha egwu bụ ihe mgbochi site na January 1 abụrụ 1359
N'okpuru iduzi nke Minister nke National Defense Hulusi Akar, Onye isi ndị agha General Gen. Yaşar Güler, Commissioner nke Land Forces Gen. Ümit Dündar, Commissioner nke Naval Forces Admiral Adnan Özbal, Commissioner nke Air Force Hasan Küçükakyüz na National [More ...]
7 Ọrịa Cancer na ọgwụ 4 ọzọ ejirila ọgwụgwọ MS
Onye na-ahụ maka ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Sel announceduk kwupụtara na ọgwụ 7 ndị ọzọ gụnyere na ndepụta nkwụghachi, 4 maka ọrịa kansa na 11 maka ọgwụgwọ MS. “Mweghachi ya na SUT ọhụrụ ahụ [More ...]
Banyere Bursa Bilecik High Standard Railway
Ursgbọ okporo ígwè Bursa-Bilecik bụ ezigbo okporo ụzọ ụgbọ elu ga-ejikọta ya na okporo ụzọ ụgbọ elu Ankara-Istanbul mgbe a ga-arụcha ya. Ihe oru ngo Bursa-Yenişehir nke 105km ka agha jikọọ na eriri Ankara-Istanbul site na Bilecik [More ...]
Mkpebi Flash Channel Istanbul Site na Courtlọikpe!
Site na arịrịọ nke kagbuo "Nleba Mmetụta Ógbè (EIA) dị mma" nke ụbọchị 17 nke Jenụwarị 2020 maka Atụmatụ Canal Istanbul megide Mịnịstrị gburugburu na obodo mepere emepe nke Obodo Obodo Istanbul. [More ...]
Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu mere ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project T26 Ọdụ Site. Karaismailoğlu, onye bịakọtara ọnụ na ndị ọrụ ebe a na-ewu ihe na mpaghara Bolezik nke Bilecik, afọ a bụ ụdị ọhụụ [More ...]
Ankara emechaa Istanbul T14 Ọwara ga-ebelata nkeji iri na anọ
Karaismailoğlu, onye nyochaala ebe owuwu T26 na mpaghara Demirköy, nke a na-arụ n'ime etiti Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project, na mpaghara Bozüyük, na-ewere usoro niile kwekọrọ na ndụmọdụ nke Ministry nke Health gbasara ụdị coronavirus ọhụrụ (Kovid-19). [More ...]
Ka ebesịrị ozi ruo afọ 83, ọrụ ndị ahụ dị na ụzọ okporo ụzọ Samsun-Sivas, bụ nke emechiri maka njem iji wee bụrụ nke ọgbara ọhụrụ na Septemba 29, 2015, akwụsịla. Ewuzigharị akụrụngwa niile na usoro nkwenkwe ụgha nke kilomita 431 na Europe [More ...]
Iji mee ka ụgbọ njem dịkwuo mma na anaghị akwụsị akwụsị, Kocaeli Metropolitan Mgbakọ, nke na-aga n’ihu na-arụ ọrụ na ọrịa coronavirus, cube cobblestones na nkwụsị ihu nke Orduevi dị na Izmit Büyük Seka Tunnel n'izu gara aga. [More ...]
Ngwa invoice kwụsịtụrụ na-abịa ndụ Izmir
Obodo Izmir nke mepere emepe na-emejuputa akwụkwọ anamachọ "mkpuchi akwụkwọ", nke bidoro na Istanbul, na İzmir n'arịrị ọha na eze. A ga-akwụ ụgwọ ego nke ezinụlọ nke nwere nsogbu akụ na ụba na ntiwapụ nke ụwa site n'ịdị n'otu İzmir. Obodo Izmir, [More ...]
Agriculture na ohia na Ministry of Nature Nchedo na National Parks (DCM) Directorate General n'ala nna Turkey fallow diya (Dama dama) maka nchebe, na-aga n'ihu mmepụta na ntọhapụ ọmụmụ. N'ọnọdụ a, ọdịdị Antalya Manavgat [More ...]
Ma a ga-akwụ ezumike nka ụgwọ ezumike ahụ obere oge tupu ezumike ahụ dị na atụmatụ nke nde ndị lara ezumike nka. Zehra Zümrüt Selçuk, onye Minista ezinụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, na ụgwọ ịkwụ ụgwọ ezumike nka [More ...]
Okwu mmeghe nke asụsụ ogbi nke Turkish maka ụmụ akwụkwọ nọ n'izu ha nwere nkwarụ
Onye Minista nke Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ, Zehra Zümrçt Sel ,uk, kwupụtara na ha ga-arụ ọrụ mmata n'etiti oke nke mmemme EBA na Mee 10-16 Mee. Minista Selçuk; “Onye isi ala anyị. Mr. Recep Tayyip Erdoğan kwuru [More ...]
Ego Ego agaghị agabiga na Taksiri Azụmaahịa! Enweghị ndị tagzi a na-enweghị ike iwere na-enweghị nkpuchi!
Minista na-ahụ maka ime obodo zigara otu ihe dị iche iche iri asatọ na abụọ maka ịba ọcha n'anya. Dabere na okirikiri ahụ, a ga-ehichapụ taxis kwa izu, ndị ahịa agaghị enwe ike ịnweta tagzi na-enweghị ihe nkpuchi. Ndị na-anya tagzi azụmaahịa na-eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ ịdị ọcha onwe onye [More ...]